စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်စားရလို့ဝိတ်မကျတာဆိုတဲ့ ဆင်ခြေတွေနားလိုက်တော့… -
စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်စားရလို့ဝိတ်မကျတာဆိုတဲ့ ဆင်ခြေတွေနားလိုက်တော့…
Posted on January 8, 2019 January 8, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
ဝိတ်မတက်ချင်ရင် ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်ချိမတို့ 🙄 🙄 🙄
ဘာလို့ဝိတ်မကျတာလဲလို့မေးရင် များသောအားဖြင့်က ချက်မစားနိုင်ဘဲ အပြင်မှာစားလို့ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်က ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များမယ်လို့ ထင်တယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ စားသောက်ဆိုင်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်စားတဲ့ အစားအသောက်ကြောင့် ဖြစ်နေတာပါနော်။ မယုံဘူးလား? ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်…
တရုတ်စားသောက်ဆိုင် သွားပြီး ဆီရွှဲရွှဲခေါက်ဆွဲကြော်၊ ကြာဇံကြော်၊ အရွက်များများပါပေမဲ့ ဆီပင်လယ်၊ ဟင်းခတ်မှုန့်ပင်လယ်ဝေနေတဲ့ ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်၊ ချိုချဉ်ကြော်၊ အဆီအခေါက် တစ်တောင်လောက်ပါတဲ့ ဝက်စတူးတွေပဲ စားသောက်လာရင်တော့ ပိန်ပါလိမ့်မယ် အားကြီးကြီး။ အဲဒီအစား တခြားဘာတွေစားရမလဲဆိုတော့…
ဖက်ထုပ်ပြုတ် – အရသာရှိရှိ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဗိုက်ဝအောင် စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖက်ထုပ်ပြုတ်ကို ရွေးတာက မမှားပါဘူးနော်။
အသားနဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကြော် (broccoli) – ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းက ရေဓာတ်အပြည့်ပါဝင်နေတဲ့ အရွက်ဆိုတာ ထွေထွေထူးထူး ပြောနေစရာမလိုပါဘူးနော်။ အဲဒီအရွက်ကို တရုတ်ပဲငံပြာရည်ဆော့စ်နဲ့တွဲဖက်ပြီး စားသုံးရရင်တော့ အရသာရှိသလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အများကြီးအထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဆန်လုံးညိုထမင်း – အမျှင်ဓာတ်နဲ့ တခြားအာဟာရဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာမို့ ယောင်းတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းပေးပါလိမ့်မယ်။
Related Article >>> အရသာလည်းရှိ အိမ်မှာလည်း အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ကင်းမွန်အစာသွပ် (၂)မျိုး
ထိုင်းအထောင်း ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးတွေကို မကြိုက်တဲ့လူတော့ ရှားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒီအထောင်းတွေမှာ သကြားကို လက်တစ်ဆုပ်လိုက် ပစ်ပစ်ထည့်ကြတာမို့ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်တွေ အများကြီး တက်တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အားလုံးကြိုက်ကြတဲ့ Thai Tea (နှင်းလည်းအရမ်းကြိုက်တာပါဆို :’) နို့ဆီနဲ့ တခြားဓာတုအချိုဓာတ်တွေ အမုန်းပါတာမို့ ဝေါင်ဝေါင်ရှေးပါတဲ့။ အဲ့တော့ ဘာစားရမှာလဲ?
ထိုင်းစတိုင်လ်ချက်ထားတဲ့ ကြက်သား – နာနတ်သီးကို ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး အထဲကအသီးတွေကိုထုတ်၊ အရွက်ကို အလှူလိုထည့်ပြီး ချဉ်စပ်ချက်ထားတဲ့ ထိုင်းစတိုင်လ် ကြက်သားဟင်းက ဝိတ်ထိန်းနေတဲ့ ယောင်းတွေ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အစားအသောက်ပါပဲ။ (ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းလှတယ်လေ :P)
ကော်ပြန့်လိပ် (အပေါင်း) – အရွက်နဲ့ အသားတွေ ဌာပနာထားပြီး ကော်ပြန့်ရွက်ကလည်း ဆန်နဲ့လုပ်ထားတာမို့ ကယ်လိုရီအရမ်းနည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကြော်ဆိုရင်တော့ ဆီထဲနှစ်ပြီး ကြော်ရတဲ့အတွက် ကယ်လိုရီပြန်များသွားနိုင်တာမို့ ရှောင်နော်။
မြန်မာထမင်းဆိုင်တွေ သွားစားရင်လည်း ဆီရွှဲရွှဲ ဟင်းအနှစ်များများ အချိုအငန်လေးလေးနဲ့ ဆီပြန်ဟင်းတွေကိုရှောင်ပြီး အရွက်ကြော်၊ မန်ကျည်းနှစ် ဒါမှမဟုတ် သံပုရာသီးကို အသားနဲ့ သုပ်ထားတဲ့ အသုပ်လေးတွေကိုပဲ စားပေါ့နော်။ ဆီပြန်ဟင်းပဲ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း အနှစ်ထည့်မစားနဲ့ (ပြောလို့လည်း ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအေ :/ ) ပြီးတော့ လက်ဖက်ပန်းကန်ရဲ့ အနေအထားမြွေဖားကိုလည်း တစ်ချက်ပြန်ရှိုးကြည့်။ ဆီအရမ်းများနေရင် လက်ကို မလှမ်းနဲ့နော်။
အိန္ဒိယ အစားအစာလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ဒံပေါက်ကို ပြေးမြင်ကြတယ်မလား? အဲဒီ ဒံပေါက်မှာ ဆီတွေအားကြီးပါနေတာရော သတိထားမိကြလား ယောင်းတို့? ပြီးတော့ အုန်းနို့်နဲ့ ချက်ထားတဲ့ ဟင်းတွေကလည်း ကယ်လိုရီ အများကြီးပါဝင်တာမို့ အုန်းနို့ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို လည်း ရှောင်ပေးပါ။ အဲဒါတွေအစား
ကြက်သားဒိန်ချဉ်ဟင်း (Tandoori) – ဒိန်ချဉ်နဲ့ တစ်ညလုံး နှပ်ထားပြီး မနက်ကျမှ နူးနူးအိအိလေးချက်ထားတဲ့ ကြက်သားဟင်းကတော့ ကြက်အရေခွံလည်း မပါ၊ ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်ခပ်များများကို ဆီနည်းနည်းပဲ ထည့်ပြီး ဖုတ်ထားတာမို့ ကယ်လိုရီ အရမ်းမတက်တော့ဘူးလေ။
အရွက်ဟင်း – အရွက်ဆိုတဲ့အမျိုးကတော့ များလေ ကောင်းလေပေါ့ ယောင်းရယ်။
Related Article >>> ဂေါ်ဖီမကြိုက်လည်း ကြိတ်မှိတ်စားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၇ ) ချက်
နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုတော့ ပီဇာဆိုင်လေး ရွေးပေးထားပါတယ်နော်။ (မပါမဖြစ်လေ) ယောင်းတို့စားနေကျ ချိစ်နှစ်ထပ်ပါတဲ့ Double Cheese Pizza တို့၊ Mozzarella Cheese Pizza တို့ဆိုတာ ယောင်းတို့ရဲ့ ဗိုက်ခေါက်လေးတွေနဲ့ အဆီတွေကို လာပါလာပါ ဖိတ်ခေါ်စရာမလိုဘဲ တစ်လုတ်စားလိုက်တိုင်း တစ်ခါ ကယ်လိုရီလေးတွေက နှစ်ဆလောက်တိုးပြီး ဝိတ်တွေတက်နေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ထောပတ်တွေ လှိုင်လှိုင်သုံးပြီး ချက်ထားတဲ့ ပါစတာ၊ စပါကတီ၊ ဆီရွှဲရွှဲထည့်ကြော်ထားတဲ့ Crispy Crusts (ကာရီမုန့်) တွေကတော့.. အင်း ပြောနေဆိုနေရင်းတောင် အဆီတွေ ဆောင့်တက်သလိုပဲ :’)
အဲဒီတော့ ပီဇာဆိုင်သွားပြီး အနံ့ရှူ ပြန်လာရမှာလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ ဒိုးသား (Dough) ကို ပါးပါးလေးနဲ့ ဖုတ်ထားပြီး ချိစ်နည်းနည်းပဲပါတဲ့ ပီဇာလောက်တော့ စားလို့ရပါတယ်နော်။
ဖတ်ပြီး စိတ်ကင်ဆာတွေ ရကုန်ပြီမလား? အရမ်းတော့ စိတ်မဖိစီးသွားပါနဲ့နော်။ ဒါက နေ့တိုင်း (သို့) နေ့တိုင်းနီးပါး အပြင်ထွက်စားနေတဲ့ ယောင်းယောင်းတွေ တတ်နိုင်ရင် ဒါမျိုးတွေ ရှောင်စားရင်တော့ ဝိတ်အရမ်းတက်၊ ဗိုက်ခေါက်ကလေး ထွက်နေတာမျိုးတွေ မဖြစ်တော့ဘဲ ကျန်းမာရေးလည်း အရမ်း မထိခိုက်တော့ဘူးပေါ့။ ယောင်းတို့ကို ကျန်းမာစေချင်လွန်းလို့ စေတနာနဲ့ပါနော်။
References : fitnessmagazine, health
ဝိတျမတကျခငျြရငျ ဖတျကွညျ့သငျ့ပါတယျခြိမတို့ 🙄🙄🙄
ဘာလို့ဝိတျမကတြာလဲလို့မေးရငျ မြားသောအားဖွငျ့က ခကျြမစားနိုငျဘဲ အပွငျမှာစားလို့ ဆိုတဲ့အကွောငျးပွခကျြက ရာခိုငျနှုနျးတျောတျောမြားမယျလို့ ထငျတယျနျော။ ဒါပမေဲ့ တကယျတမျးကတြော့ စားသောကျဆိုငျကွောငျ့ မဟုတျဘဲ ကိုယျစားတဲ့ အစားအသောကျကွောငျ့ ဝတိုလာတာပါနျော။ မယုံဘူးလား? ဆကျဖတျကွညျ့လိုကျ…
တရုတျစားသောကျဆိုငျ သှားပွီး ဆီရှဲရှဲခေါကျဆှဲကွျော၊ ကွာဇံကွျော၊ အရှကျမြားမြားပါပမေဲ့ ဆီပငျလယျ၊ ဟငျးခတျမှုနျ့ပငျလယျဝနေတေဲ့ ကုနျးဘောငျကွီးကွျော၊ ခြိုခဉျြကွျော၊ အဆီအခေါကျ တဈတောငျလောကျပါတဲ့ ဝကျစတူးတှပေဲ စားသောကျလာရငျတော့ ပိနျပါလိမျ့မယျ အားကွီးကွီး။ အဲဒီအစား တခွားဘာတှစေားရမလဲဆိုတော့…
ဖကျထုပျပွုတျ – အရသာရှိရှိ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဗိုကျဝအောငျ စားခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဖကျထုပျပွုတျကို ရှေးတာက မမှားပါဘူးနျော။
အသားနဲ့ ပနျးဂျေါဖီစိမျးကွျော (broccoli) – ပနျးဂျေါဖီစိမျးက ရဓောတျအပွညျ့ပါဝငျနတေဲ့ အရှကျဆိုတာ ထှထှေထေူးထူး ပွောနစေရာမလိုပါဘူးနျော။ အဲဒီအရှကျကို တရုတျပဲငံပွာရညျဆော့ဈနဲ့တှဲဖကျပွီး စားသုံးရရငျတော့ အရသာရှိသလို ကနျြးမာရေးအတှကျလညျး အမြားကွီးအထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။
ဆနျလုံးညိုထမငျး – အမြှငျဓာတျနဲ့ တခွားအာဟာရဓာတျတှေ ကွှယျဝစှာ ပါဝငျနတောမို့ ယောငျးတို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကို ထိနျးပေးပါလိမျ့မယျ။
Related Article >>> အရသာလညျးရှိ အိမျမှာလညျး အလှယျတကူပွုလုပျနိုငျတဲ့ ကငျးမှနျအစာသှပျ (၂)မြိုး
ထိုငျးအထောငျး ခဉျြခဉျြစပျစပျလေးတှကေို မကွိုကျတဲ့လူတော့ ရှားလိမျ့မယျထငျတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး အဲဒီအထောငျးတှမှော သကွားကို လကျတဈဆုပျလိုကျ ပဈပဈထညျ့ကွတာမို့ သှေးတှငျးအခြိုဓာတျတှေ အမြားကွီး တကျတတျပါတယျ။ ပွီးတော့ အားလုံးကွိုကျကွတဲ့ Thai Tea (နှငျးလညျးအရမျးကွိုကျတာပါဆို :’) နို့ဆီနဲ့ တခွားဓာတုအခြိုဓာတျတှေ အမုနျးပါတာမို့ ဝေါငျဝေါငျရှေးပါတဲ့။ အဲ့တော့ ဘာစားရမှာလဲ?
ထိုငျးစတိုငျလျခကျြထားတဲ့ ကွကျသား – နာနတျသီးကို ထကျခွမျးခွမျးပွီး အထဲကအသီးတှကေိုထုတျ၊ အရှကျကို အလှူလိုထညျ့ပွီး ခဉျြစပျခကျြထားတဲ့ ထိုငျးစတိုငျလျ ကွကျသားဟငျးက ဝိတျထိနျးနတေဲ့ ယောငျးတှေ ရှေးခယျြသငျ့တဲ့ အစားအသောကျပါပဲ။ (ဓာတျပုံရိုကျလို့လညျးလှတယျလေ :P)
ကျောပွနျ့လိပျ (အပေါငျး) – အရှကျနဲ့ အသားတှေ ဌာပနာထားပွီး ကျောပွနျ့ရှကျကလညျး ဆနျနဲ့လုပျထားတာမို့ ကယျလိုရီအရမျးနညျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အကွျောဆိုရငျတော့ ဆီထဲနှဈပွီး ကွျောရတဲ့အတှကျ ကယျလိုရီပွနျမြားသှားနိုငျတာမို့ ရှောငျနျော။
မွနျမာထမငျးဆိုငျတှေ သှားစားရငျလညျး ဆီရှဲရှဲ ဟငျးအနှဈမြားမြား အခြိုအငနျလေးလေးနဲ့ ဆီပွနျဟငျးတှကေိုရှောငျပွီး အရှကျကွျော၊ မနျကညျြးနှဈ ဒါမှမဟုတျ သံပုရာသီးကို အသားနဲ့ သုပျထားတဲ့ အသုပျလေးတှကေိုပဲ စားပေါ့နျော။ ဆီပွနျဟငျးပဲ ရှိတယျဆိုရငျလညျး အနှဈထညျ့မစားနဲ့ (ပွောလို့လညျး ရမှာမဟုတျပါဘူးအေ :/ ) ပွီးတော့ လကျဖကျပနျးကနျရဲ့ အနအေထားမွှဖေားကိုလညျး တဈခကျြပွနျရှိုးကွညျ့။ ဆီအရမျးမြားနရေငျ လကျကို မလှမျးနဲ့နျော။
အိန်ဒိယ အစားအစာလို့ ပွောလိုကျတာနဲ့ ဒံပေါကျကို ပွေးမွငျကွတယျမလား? အဲဒီ ဒံပေါကျမှာ ဆီတှအေားကွီးပါနတောရော သတိထားမိကွလား ယောငျးတို့? ပွီးတော့ အုနျးနိျု့နဲ့ ခကျြထားတဲ့ ဟငျးတှကေလညျး ကယျလိုရီ အမြားကွီးပါဝငျတာမို့ အုနျးနို့ပါတဲ့ အစားအသောကျတှကေို လညျး ရှောငျပေးပါ။ အဲဒါတှအေစား
ကွကျသားဒိနျခဉျြဟငျး (Tandoori) – ဒိနျခဉျြနဲ့ တဈညလုံး နှပျထားပွီး မနကျကမြှ နူးနူးအိအိလေးခကျြထားတဲ့ ကွကျသားဟငျးကတော့ ကွကျအရခှေံလညျး မပါ၊ ဟငျးခတျ အမှေးအကွိုငျခပျမြားမြားကို ဆီနညျးနညျးပဲ ထညျ့ပွီး ဖုတျထားတာမို့ ကယျလိုရီ အရမျးမတကျတော့ဘူးလေ။
အရှကျဟငျး – အရှကျဆိုတဲ့အမြိုးကတော့ မြားလေ ကောငျးလပေေါ့ ယောငျးရယျ။
Related Article >>> ဂျေါဖီမကွိုကျလညျး ကွိတျမှိတျစားသငျ့တဲ့ အကွောငျးရငျး (၇ ) ခကျြ
နောကျဆုံးတဈခုကိုတော့ ပီဇာဆိုငျလေး ရှေးပေးထားပါတယျနျော။ (မပါမဖွဈလေ) ယောငျးတို့စားနကြေ ခြိဈနှဈထပျပါတဲ့ Double Cheese Pizza တို့၊ Mozzarella Cheese Pizza တို့ဆိုတာ ယောငျးတို့ရဲ့ ဗိုကျခေါကျလေးတှနေဲ့ အဆီတှကေို လာပါလာပါ ဖိတျချေါစရာမလိုဘဲ တဈလုတျစားလိုကျတိုငျး တဈခါ ကယျလိုရီလေးတှကေ နှဈဆလောကျတိုးပွီး ဝိတျတှတေကျနပေါလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့ ထောပတျတှေ လှိုငျလှိုငျသုံးပွီး ခကျြထားတဲ့ ပါစတာ၊ စပါကတီ၊ ဆီရှဲရှဲထညျ့ကွျောထားတဲ့ Crispy Crusts (ကာရီမုနျ့) တှကေတော့.. အငျး ပွောနဆေိုနရေငျးတောငျ အဆီတှေ ဆောငျ့တကျသလိုပဲ :’)
အဲဒီတော့ ပီဇာဆိုငျသှားပွီး အနံ့ရှူ ပွနျလာရမှာလားဆိုတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျနဲ့ ဒိုးသား (Dough) ကို ပါးပါးလေးနဲ့ ဖုတျထားပွီး ခြိဈနညျးနညျးပဲပါတဲ့ ပီဇာလောကျတော့ စားလို့ရပါတယျနျော။
ဖတျပွီး စိတျကငျဆာတှေ ရကုနျပွီမလား? အရမျးတော့ စိတျမဖိစီးသှားပါနဲ့နျော။ ဒါက နတေို့ငျး (သို့) နတေို့ငျးနီးပါး အပွငျထှကျစားနတေဲ့ ယောငျးယောငျးတှေ တတျနိုငျရငျ ဒါမြိုးတှေ ရှောငျစားရငျတော့ ဝိတျအရမျးတကျ၊ ဗိုကျခေါကျကလေး ထှကျနတောမြိုးတှေ မဖွဈတော့ဘဲ ကနျြးမာရေးလညျး အရမျး မထိခိုကျတော့ဘူးပေါ့။ ယောငျးတို့ကို ကနျြးမာစခေငျြလှနျးလို့ စတေနာနဲ့ပါနျော။
Tagged Fat, Food, Healthy, less, oil, resturants, skim, takeout
ဒရာမာတွေထဲက ကိုရီးယားရေဘဝဲအစပ်ကြော်ကို အိမ်မှာ အလွယ်တကူ လုပ်စားကြမယ်
Posted on October 9, 2018 October 9, 2018 Author Aye Mon Kyaw
ဖတ်ရင်း သွားရည်တွေကျလာ 🤤🤤🤤
အိမ်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လို့ ရတဲ့ အချိုပွဲ (၃) မျိုး
Posted on January 26, 2018 Author Akari
အချိုပွဲတွေ ကိုယ့်ဖာသာ အိမ်မှာလုပ်စားတတ်နေပြီဆိုရင်တော့ အပြင်မှာ ဝယ်စားဖို့ ပိုက်ဆံ မကုန်တော့ဘူးလေနော်.. စီးပွားတောင် ဖြစ်ဦးမယ် ဟီးဟီး 😛
ကင်မ်ချီကို အိမ်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ဘယ်လို လုပ်စားကြမလဲ?
Posted on February 9, 2018 February 9, 2018 Author Aye Mon Kyaw
ကိုရီးယားကားကြည့်တိုင်း သွားရည်ကျကျနေရတဲ့ အဖြစ်ကနေ လွတ်ဖို့ ကွကိုယ် ကင်မ်ချီလုပ်ကြည့်ရအောင်လေ..
တစ်မိနစ်အတွင်း ဒီစာအုပ်တွေအကြောင်း မှန်မှန်ဖြေနိုင်ရင် ယောင်းက စာကြမ်းပိုးတစ်ယောက်ပါပဲ
မျက်တွင်းဟောက်ပက်နဲ့ ဇီးကွက်ဘဝ ရောက်ရခြင်း အကြောင်းရင်း (၇) ချက်